Dood ku saabsan marxaladda kalaguurka iyo kaalinta Baarlamaanka oo lagu qabtay Muqdisho.
Xubno ka tirsan 2-da Gole iyo Siyaasiyiin kale ayaa manta ka qeybgalay kulan ka dhacay xarunta Wasaaradda Warfafinta oo looga hadlaayey marxalada kalaguurka iyo kaalinta Barlamaanka ay ku leeyihiin qabsoomidda doorashooyinka la filayo.
Kulankaan oo qeyb ka ah barnaamijka kulanka todobaadka ee Warbaahinta Qaranka,waxaa manta ka qeybgalay,1-Guddoomiyaha Guddiga Difaaca Amiga Senator Maxamed Amiin Sheekh.2 Xildhibaan Cabdi Cali Xasan iyo Siyaasi Cabdiraxmaan Diinaari oo Xilal kala duwan ka soo qabtay dalka.
Kulanka doodda oo u dhacay si saraaxad leh,waxaa Xildhibaanadii iyo Siyaasiyiin kale ee ka qeybgalay ay isla qireen in lagu jiro xaaladda adag,sidaa daraadeedna loo baahan yahay In xubnaha 2-dole aysan caqabad ku noqon nidaamka doorashooyinka la filayo.
Xubnahaasi waxa ay intaa ku dareen in ay lagama maarmaan tahay in tixgalin iyo door muhiim ah la siiyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada,si looga miro dhaliyo natiijada laga filan karo doorashooyinka soo socda.
Mas’uuliyiintaan waxa ay soo jeediyeen in Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ay la yimaadaan talo wadaag ah,isla markana laga heshiiyo waqtiga suurtagalka ah ee la qabanaayo doorashooyinka.